Faaqidaadda Toddobaadka, 01 May 2018
Talaado 1 May 2018
Faaqidaadda: Dilalka Dhalinyarada Soomaaliyeed ee Qurbaha
Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo aan maanta diiradda ku saari doonno dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha, gaar ahaan Waqooyig Ameerika.
Faaqidaada Toddobaadka: Islaam Naceybka Galbeedka
Barnaamijka Faaqidaada Todobaadka, waxaan kusoo qaada doonnaa falalka "Islam Naceybka" ee lagula kaco Muslimiinta ku nool dalalka reer Galbeedka.
Halkaan ka dhageyso barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka. Waxaa soo jeedineysa Falastiin Ahmed Iman.
Faaqidaadda: Jahwareerka Siyaasadeed ee Soomaaliya
Faaqidaadda: Heshiiskii Muranka Dhaliyay ee Dekadda Berbera
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo ku saabsan heshiiskii muranka dhaliyay ee dekadda Berbara ee Somaliland, DP World iyo Itoobiya dhex maray.
Faaqidaadda: AMISOM 10 Sano Kadib
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka Faaqidadda Toddobaadka, oo aannu ku eegi doonno wax-yaabihii u qabsoomay AMISOM muddadii ay Soomaaliya joogeen.
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay is casilaadda reysal wasaaraha Itoobiya, Hailemariam Desalegn, iyo saameynta ay ku yeelan karto siyaasadda iyo nabad galyada Itoobiya.
Faaqidaadda: Hal Sano Kadib Doorashadii Farmaajo
Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka maanta waxa uu ku saabsan yahay hal sano kadib doorashadii madaxweye Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.
Faaqidaadda: Khilaafka Masar iyo Itoobiya ee Wabiga Nile
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo aan maanta diiradda ku saareyno khilaafka ka dhaxeeya dalalka Itoobiya iyo Masar ee ku aaddan biya xireenka ay Itoobiya ka damacsan tahay inay ku sameyso wabiga Nile.